China ụlọ ọrụ mmepụta ihe na enamel | Kingtai
Ọ bụrụ n ’ịmụgoro imepụta enamel nke gị, ikekwe ị gafee okwu a bụ“ enamel siri ike ”na“ enamel dị nro. ”Echere m na ọtụtụ mmadụ nwere otu ajụjụ: Gịnị bụ ihe dị iche na ha abụọ? ọdịiche dị n'etiti enamel siri ike na enamel dị nro bụ ọdịdị nke ngwaahịa a rụchara. Ihe mkpuchi enamel dị nro na-adị ire ụtọ, na-egosipụta ezi agba dị mma. Elu bụ wireless, na nsọtụ ọla nke ncha enamel pin bụ convex.Both ụzọ na-eji otu metal ebu, na ha abụọ nwere na-enwu gbaa na vibrant colors.But e nwere ụfọdụ pụrụ iche nhọrọ na-kpọmkwem na adụ enamel.
Mgbe ịhọrọ Hard Enamel Hard enamel pinke na-adịgide adịgide ma na-eguzogide ọkọlọtọ ma e jiri ya tụnyere enamel dị nro. Ọtụtụ ndị na-ahọrọ enamel siri ike karịa enamel dị nro n'ihi ọdịdị dị ọcha, mechara. Ọtụtụ aghụghọ nwere ike ịrụ ọrụ na enamel siri ike na nke dị nro, yabụ ọtụtụ oge ọ na-agbadata mmasị onwe onye. Akpa enamel pin na-ebu ụzọ jupụta na agba, mgbe ahụ, ntụtụ ihu ihu ala ka ọ dị larịị ma dịkwa mma. Igha na ịkụcha ha na-eme ka ha ghara iche na ụfọdụ ejiri ọla mechie. Y’oburu n’icho ihe nkpuchi ọla edo ma obu ọla ọcha, mgbe ahu enamel siri ike nwere ike buru ezi ihe diri imebe gi.
Ihe nkedo enamel siri ike na-adịgide adịgide ma na-eguzogide ọgwụ karịa nro enamel.
Ọtụtụ ndị na-ahọrọ enamel siri ike karịa enamel dị nro n'ihi ọdịdị dị ọcha ma na-enwu gbaa.
Ọtụtụ aghụghọ dị na enamel siri ike na nke dị nro, yabụ ọtụtụ oge ọ dabere na mmasị onwe onye.
Ihe nrịba nke enamel siri ike na-ebu agba na elu nke ntụtụ ahụ.
Ta nri na imepụta ihe na-eme ka ha ghara ịdị na-arụ ọrụ na ụfọdụ akụkụ ígwè.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ọla edo ma ọ bụ ọla edo ọkọlọtọ, enamel siri ike bụ ezigbo nhọrọ maka imewe gị.
Maka enamel siri ike, enamel na-agbakwunye tupu etinyere ya, a na-agbakwunye enamel ahụ ma na-egbu maramara ka ọ dị larịị. A ghaghị ịchacha agba ọ bụla na oven otu nke na-agbakwunye na usoro na ụgwọ. Ozugbo agbakwunyere agba niile mgbe ahụ, enwere ike ịmegharị baajị ma megharịa ya iji mezue baajị ahụ. The ọtụtụ polishing usoro bụ ihe mere baajị nwere ike nweta ubé obere nkọwa karịa adụ enamel na ihe mere ụfọdụ nke metal edoghi nwere ike na-agbasa na mmepụta na-thicker karịa mbụ imewe. Usoro enamel anyị siri ike bụ usoro nke oge a nke usoro enamel siri ike na ọdịiche dị n'etiti enamel anyị siri ike bụ ezigbo enamel.
Maka enamel siri ike, tinye enamel tupu ịhọrọ ma mezie n'otu ụgbọ elu dị ka akara igwe. A ghaghị ịcha agba ọ bụla n'otu n'otu na oven, na-achụso ogo dị elu mana ịbawanye usoro mmepụta na ụgwọ. Ozugbo agba niile dị agbakwunyere, mgbe ahụ baajị nwere ike plated na-egbu maramara ọzọ iji wuchaa baajị .Ọ were ọtụtụ polishing iji mee ka baajị ahụ nweta obere nkọwa zuru oke karịa enamel dị nro, yana ihe kpatara ụfọdụ waya ji nwee ike gbasaa na mmepụta na thicker karịa Usoro nke mbụ anyị na-enwu enwu bụ usoro nke oge a, isi ihe dị iche na usoro enamel siri ike na enamel anyị siri ike bụ ezigbo enamel.
Nke gara aga: Nwuo na Ọchịchịrị Lapel Pin
Osote: Nkedo Lapel pin
Enamels siri ike